Kulan is Barasho iyo Hadhimo Sharafeed u Samaysay Xubnaha Cusub Daladda Naafada Qaranka SNDF Wasiirka Shaqo Gelinta, Ariimiha Bulshada Qoyska Marwo Hinda Jaamac Xirsi (Gaani) - Guuguule News Network
Hargeysa(Guuguulenews) Waxa Maanta Wasiirka Shaqo Gelinta Arrimaha Bulshada iyo Qoysku ay kulan qado sharaf iyo is barasho ah ugu samaysay Xubnaha cusub ee Dalladda Guud ee Naafada Qaranka Somaliland (Somaliland National Disability Forum) kulankaas oo ugu horeyn Mahad celin ka jeediyey Gudomiyaha Dalada Naafada Qaranka Md Daahir Cabdi
Waxaanu wasiirka uga mahad celiyey sida fiican ugu heelan tahay bulshadeena gaar ahaan dadka naafada ah ee wasaaradeedu masuulka ka tahy waxaanu sheegey inay kaalimo wax ku ool ah ka qadatay qabsoomida doorashada dalada naafada iyo sidii aan is qabsi u iman lahayn ,kuna guulaysatay .
Waxa kale uu sheegay inay noqotay wasiir Hinda Gaani wasiirki koobaad ee u samaysa soo dhaweyn iyo casuumad dhamaan wasiiradii soo maray wasaaradaas
Waxa sheegay in wasiirkani igu suntan tahay baal dahab ah una qabatay dhamaan tabashooyinkii naafada. Gebogebadii waxa Gudoomiyaha Dallada Naafada yidhi Wasiir Hinda Waxay ka shaqeysiisay dardar gelisay korna u qaday wada shaqaynta Wasaaradeeda iyadoo xidhiidh wada shaqayneed oo dhaw la leh masuuliyiinta ay u igmatay waaxaha Naafada iyo Daladda guudba.
Wasiirka wasaarada Shaqo gelinta, Arrimaha Bulshada iyo Qoyska Somaliland Marwo Hinda Jaamac Xirsi Gaani ayaa soo jeedisay kelmado isugu jira Dardaaran iyo Mahad naq waaxay wasiirku waxay ugu horeyn uga mahad celisay xubnaha dalada naafada qaran Somaliland sidii fiican ugu adeegaan bulshada ay wakiilka ka yihiin iyo sidii habsamida lahayd u qabsadeen doorashadii guud ee dalada oo dhawaan qabsoontay. Wasiir hinda Jaamac Xirsi waxay kula dardaarantay inay wada shaqayn fiican yeeshaan bulshadaa ay xilka u hayaan oo ah inta ugu nugul bulshadeena.
Ugu danbayntiina marwo Hinda Jaamac Xirsi waxay sheegtay in ka wasaarada ahaan ay tahay meesha kaliya ama waaxda muhiimada ugu badan siiso imikana dedaalkeedi usii laban laabayso waxna aan laga hagran doonin bulshada naafada somliland. Sidaa kula shaqaynayaan dalada naafada qaranka somiland.
Waxa halakaas ka hadlay Agaasimaha Waaxda Naafada ee wasaarada shaqo gelinta ariimaha bulshada iyo qoyska Siciid sheikh Mawliid isago u mahadceliyey wasiirka iyo gudoomiyaha dalada naafada qaranka.